Jiro ambany farafara – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 2, 2012 novembre 2, 2012 Laisser un commentaire sur Jiro ambany farafara
« Ary hoy Izy taminy: Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao amin’ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho »Raha misy olona manan-tsofina ho entin-mihaino, aoka izy hihaino. Ary hoy Izy taminy: diniho izay teny renareo; araka ny ohatra anoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary omena mihoatra aza hianareo. Fa izay manana no omena; ary ny amin’izay tsy manana, na dia izay kely anany aza dia alaina aminy. » Marka 4: 21-25
Maha-variana ny fomba nandaharan’Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin’izy namorona izao tontolo izao, fa hita mihitsy ny fahaizana sy ny fahendrena ananany amin’ny maha Andriamanitra mpamorona Azy.Ny olombelona no noforonony farany taorinan’ny zavaboaary hafa rehetra.Nanana tanjona Andriamanitra tamin’izany filaharana nofidiany izany tamin’ny nanaovana ny olombelona. Noforonina farany mba ho afaka « manjaka »amin’izay efa voaforona teo aloha rehetra! « Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa
fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny bibidia rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. »
Eto amin’ity Teny ao amin’ny Maraka 4 ity koa dia efa voalahatr’Andriamanitra ny amin’ny jiro sy ny vata famarana, na ny jiro sy farafara! Ny jiro tamin’ny andro taloha dia solika asiana lahiny no natao ho fampirehitra hitondra fanazavana ho an’ny efi-trano. KOa raha atao ao ambany vata famarana na ambany farafara izany dia ahatanteraka ny fanazavana ny efitra fa mety hiteraka loza indray dia ny fandoroana ny vata na ny farafara ary dia hiafara hatramin’ny fahamaizan’ny trano. Eo amin’ny fanaovan-jiro no toerana
sahaza efa natao hitoeran’ny jiro: raha amin’ny toerana tokony hipetrahany no misy azy dia hahatahteraka ny amin’ny ilana azy izy dia ny fanazavana ny tokantrano.
Isika olombelona noforonin’Andriamanitra koa dia misy toerana efa nmboarin’Andriamanitra hitoerantsika ary dia toerana manamboninahitra tokoa izany!
Noforonina hampanompo ny tany ny olombelona, noforonina hanjaka amin’ny zavaboaary. Ny zava miseho anefa dia tsy izany velively! Ny olombelona indray no manompo ny tany fa tsy mampanompo ny tany araka ny nandaharan’Andriamanitra azy, ao ny manompo tapa-kazo, ao ny manompo biby, ao ny manompo taratasy izay atao hoe vola, raha ny Soratra Masina dia ny Mpanao no tokony hotompoina fa tsy ny natao.
Raha ao ambany farafara tokoa no ampirehetina ny labozia, dia tsy hazava mihitsy, araka ny efa voalaza teo dia hiteraka fandoroana ny trano. Isika raha tsy mipetraka amin’ny maha-mpanjaka antsika ny zavaboaary fa manompo ny zavaboaary dia hitera-doza ho antsika izany: sady tsy tanteraka ny andraikitra nomena antsika, no mitera-doza ho antsika izany, satria tsy ny afo ety antany ihany no
mety handoro antsika fa ilay Afobe tsy mety levona izay misy any amin’ny fahaverezana mandrakizay no hampijaly ny olona izay tsy mipetraka amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy!
I Satana sy ny asany rehetra no mampitsimbadika ny toerana tokony hipetrahan’olona. Ao ny famitahana maro samihafa, ao ny fakana fanahy toy ny nataony tamin’i Jesosy. Nandresy anefa ny Tompontsika! ISika koa raha miray Aminy ka mitoetra ao anatintsika ny Teniny dia ataony mpandresy miaraka Aminy!
Raha tsy mipetraka eo amin’ny toerana efa nomanina ho antsika isika dia ho hita miharihary ny vokatr’izany satria ambara eto fa tsy misy takona izay tsy ho hita.
Ny mpanjaka tsara dia ny mpanjaka mahay mitondra izay eo ambany fahefany Simba izao tontolo iainantsika izao noho ny tsy fiheverana ny vokatry ny fampiasana tsy aradrariny ny zavatra nomen’Andriamanitra anjakantsika.
Ny toerana nametrahana antsika dia toerana be voninahitra, toerana eo akaikin’Andriamanitra: mitoetra ho maha mpanjaka ny zavaboaary antsika.
Ny faharatsiana dia ny fisarahana amin’Andriamanitra, ny tsy firaisana Aminy!
Ny faharatsiana dia ny tsy fipetrahana amin’ny toerana nametrahany antsika.
« Aoka ny olona rehetra izay manonona ny Anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy ».
Ny fampiasantsika ny vatantenantsika ho amin’ny zavatra mamoafady dia fanalambaraka ny toerana be voninahitra nametrahana antsika, ary dia fanalambaraka an’Andriamanitra mihitsy. Aoka hiala amin’ny ratsy!
Raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin’ireny, dia ho fanaka homemboninahitra izy.
Misy karazana fanaka ao antokantrano: ao ny volamena, ao ny volafotsy, ao ny vy, ao fanaka hazo,…, ka ny sasany omem-boninahitra, ary ny sasany halambaraka!
Koa raha niala tamin’ny toerana mahapanjaka ny zavaboaary anao hianao, raha niala tamin’ny toerana maha endrik’Andriamanitra anao, niala tamin’ny maha fanaka omemboninahitra anao hianao, dia miverena amin’ilay toerana efa voatokan’ny Tompo ho anao! Mety efa natory antatatra hianao noho ny nanompoanao ny toaka, mety efa nanalabaraka ny Tompo hianao tamin’ny filana ratsy, hoy Jesosy aminao:
« Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin’ireny, dia ho fanaka omemboninahitra izy.
Ny fanamasinana ny fanaka dia ny Tenin’Andriamanitra, ny Firaisana amin’ny Tompo Jesosy, ny fiafaneraserana amin’i Jesosy Kristy. Ny fanononantsika ny Anaran’ny Tompo dia manome antsika hery ho entina mandresy hiala amin’ny ratsy. Tsy mahala ny tenatsika amin’ny ratsy samirery isika fa mila ny Tompo manampahefana hanala antsika amin’izany.Rehefa manaiky hamasinin’i Jesosy isika dia lasa fanaka mahasoa ho an’ny Tompo, fanaka voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra!
Hotanterahan’i Jesosy aminao anie izany!
Publié parfilazantsaramada novembre 2, 2012 novembre 2, 2012 Publié dansUncategorized